ငါ FPAM ကိုငြီးငွေ့တယ် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 17, 2007 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2014 Douglas Karr
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်ရှိပါကသင် FPAM ရရှိမည်မဟုတ်ပေလော။
ဒါဟာတော်တော်လေးရယ်စရာကောင်းပေမယ့်မဟုတ်ဘူး။ ငါထင်တာကဒါငါခေါ်တာပေါ့။ FPAM = Facebook Spam ။ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ်အ ၀ င်အ ၀ င်မှာမိတ်ဆွေဖိတ်ကြားခြင်းများ၊ ဖြစ်ရပ်မှန်ဖိတ်ကြားခြင်းများ၊ သူငယ်ချင်းများကိုဖိတ်ကြားခြင်းများ၊ ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများကကျွန်ုပ်အားမေးစရာမေးခွန်းများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုတပ်ဆင်သင့်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများဖြစ်သင့်သည်။
ကျွန်ုပ်ဘဝသည်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်၏အွန်လိုင်းဘ ၀ လည်းမရှိပါ။ Facebook ကငါပိုင်သောလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့အားလုံးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေပုံရသည် တစ်ခါတုန်းကအဲဒါကို Prodigy လို့ခေါ်တယ်။ ယောက်ျားတွေသတိရလား AOL လည်းအဲဒီမှာရှိ၏။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ထိုအချိန်က ISP များမဟုတ်ကြပါ၊ ၎င်းတို့သည်သင်အွန်လိုင်းလိုအပ်သမျှဖြစ်ရန်ကြိုးစားနေသည်။ AOL ကသင့်အားသူတို့၏ browser နှင့်ခဏကြာအောင်ဝက်ဘ်ကိုလှန်လှောကြည့်စေခဲ့သည်။
အဲဒီအချိန်မှာအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ အခုအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။ ဖေ့စ်ဘွတ် - မင်းငါ့ဘဝရဲ့ဗဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်တွင်သူငယ်ချင်းများ (ဖေ့စ်ဘွတ်အပြင်ဘက်)၊ စစ်မှန်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိလူမှုရေးဘ ၀ နှင့်အခြားကမ္ဘာ၏အခြားသောအကျိုးစီးပွားများရှိသည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင်“ Leave Me Alone” အက်ပလီကေးရှင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိသည်။ ဒီအပလီကေးရှင်းဟာ ၀ င်ရောက်လာတဲ့တောင်းဆိုမှုအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ပြီး Leave Me Alone လို့အီးမေးလ်နဲ့တောင်းဆိုသူကိုပြန်လည်ဖြေကြားပေးမှာပါ။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာသို့သင်ရောက်သောအခါ“ Leave me oneone!” ဖတ်သင့်သည်။
Tags: Facebook ကfacebook spam များfpam
17:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 10 မှာ
သို့သော်၊ သင်ဖိတ်ကြားချက်များမခံလိုပါကသင်၏ Facebook တွင်ရှာဖွေမှုဆက်တင်ကိုမည်သူမျှရှာ။ မရနိုင်အောင်သူငယ်ချင်းတောင်းဆိုမှုများ၊ သင်နှင့်အခြားအရာများကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ပါ။ ထောင်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုအကျဉ်းချုံးလိုက်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်လိုချင်သောသူများ၏ဖိတ်ကြားချက်များသာရရှိသည်။
19:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 11 မှာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Duane! ငါလုပ်မယ်!
စက်တင်ဘာ 18, 2007 မှာ 12: 26 AM
လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်ကကျွန်ုပ်၏အကောင့်ကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ပိတ်ထားပြီးနောက်သူတို့သည်အဘယ်ကြောင့်မေးမြန်းကြသနည်း။ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာစာသားအကွက်ရှိသော“ အခြား” ဖြစ်သည်။ သူတို့ကတောင်းတယ်။ ငါထားသည်:
အဲဒါကအဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုဖြစ်လာမှာကိုကျွန်တော်သံသယဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကကျွန်တော့်ကို ၂ ရာခိုင်နှုန်းထည့်သွင်းဖို့အခွင့်အရေးပေးခဲ့တယ်။
စက်တင်ဘာ 18, 2007 မှာ 2: 16 AM
ဖြစ်ရပ်များ (သို့) နံရံသတင်းများ (သို့) မိတ်ဆွေ၏တောင်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ Facebook မှအီးမေးလ်များကိုကျွန်ုပ်မတ်တပ်ရပ်နိုင်သည်။ ငါမခံရပ်နိုင်တာကငါမလိုချင်တဲ့ applications တွေဆီကအီးမေးလ်တွေပါ။ မည်သည့် application မှငါ့ကိုအီးမေးလ်ပို့လျှင်ငါချက်ချင်းငါကပိတ်ဆို့။
ငါဟာ“ Leave me alone” လျှောက်လွှာကိုကြိုက်တယ်။ ငါ Gmail ထဲမှ“ from: facebook” ကိုနှိပ်ပြီးဖျက်လိုက်သည့်အခါတစ်ပတ်လျှင် ၅ မိနစ်ခန့်သက်သာသည်။
19:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 54 မှာ
ဒါပေမယ့် Facebook ကသင့်ကိုပေးပို့လိုက်တဲ့သတိပေးချက်များကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် - Account> Notifications အောက်မှာသာကြည့်ပါ။ သင်ရွေးချယ်စရာများအားလုံးကိုအမှတ်အသားပြုပြီးလျှင်အီးမေးလ်အမြောက်အများမရနိုင်ပါ။ 😉
19:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 12 မှာ
ဘယ်သူသိလဲ။ ငါယနေ့အရာ2သင်ယူ, bacn နှင့်သူတို့အားအသိပေးချက်အားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hannes!
19:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 7, 45 မှာ
ကျွန်တော့်အတွက်တော့သူငယ်ချင်းကငါသိတဲ့သူ၊ ငါ့မှာတူညီတဲ့အရာတွေရှိတယ်၊ ပြီးတော့တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘ ၀ တန်ဖိုးကိုထပ်ဖြည့်ပေးနိုင်တယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဆွေခင်ပွန်း၏ '' အဆင့်သတ်မှတ်ချက် "လိုအပ်ဘာလဲ? တချို့ကအခြားသူများထက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်ဆံခွင့်ရပြီးအခြားသူများမှာမူသင်နေရာတစ်ခုကိုအခါအားလျော်စွာသင်မြင်တွေ့နေရသောအသိအကျွမ်းများသာဖြစ်သည်။
ငါ့ကို bug လုပ်သောသူများသည်ကျွန်ုပ်ကိုနေ့စဉ်ရောင်းရန်ကြိုးစားသော 'သူငယ်ချင်းများ' ဖြစ်သည်။ ငါသူတို့စတင်သည်တစ်ချိန်ကသူတို့ကို 'unfriend' စတင်ခဲ့သည်!
၀ ံပုလွေကောင်များနှင့် ၀ ံပုလွေများကိုက်ခံရသည့်အတွက်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကျည်ဆန်များကြောင့်ငွေကျည်ဆန်များပြတ်တောက်နေသည်ကိုတွေ့နေရသည်။
လူအများစုက applications များထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၎င်းတို့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသူတို့ထည့်သွင်းတိုင်းထပ်မံဖြန့်ဖြူးနေခြင်းကိုဆိုလိုသည်ဆိုတာလူအများစုကမသိကြပါ။
20:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 26 မှာ
စတီဖင်၏မှတ်ချက်ကိုလည်း။ Facebook သည် Flyers Pro ကိုတနင်္လာနေ့တွင် Google Ad Words ကဲ့သို့စတင်ခဲ့သည်။ Facebook ကမင်းရဲ့အချက်အလက်တွေကိုရောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့ system ကမင်းရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုဖတ်တယ်။ Facebook မှာသင်ကြော်ငြာသူထံမှတင်လိုက်သောအရာပေါ်အခြေခံပြီးလက်ကမ်းကြော်ငြာများကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဒါမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး လူအများစုအတွက်ကတော့ Facebook ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာသင်ယူဖို့ပါ။ ငါဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါလိုချင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုသာရခဲ့တယ်၊ ဒါက Facebook ကိုအစကတည်းကဆွဲဆောင်ခဲ့တယ်။ တစ်ခုခုကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် settings ကိုပြောင်းပါ။